आमा नहुँदा बुवाले छोरी गर्भवती बनाए ! गाउँलेले थाहा पाएपछि… –
आमा नहुँदा बुवाले छोरी गर्भवती बनाए ! गाउँलेले थाहा पाएपछि…
एजेन्सी । श्रीमतीको निधनपछि एक पुरुषले आफ्नै छोरीको यौन शोषणा गरी गर्भवती बनाएको सनसनीपूर्ण खबर बाहिर आएको छ ।
घटना महाराष्ट्रको सताराको हो । जहाँ गाउँलेले थाहा पाएर यो घटनालाई गाउँ पञ्चायतसम्म पुर्याएका छन् । यो घटनामा त्यहाँको जाति पंचायतले छोरीको बलात्कार गरेको अभियोगमा बाबुका साथै पीडित छोरीलाई पनि सजाय सुनाएको छ । पंचायतको फैसलापछि बाबुछोरीमाथि १०-१० कोरा(लाठी) हानिएको थियो ।
समाचार अनुसार घटना सतारा जिल्लाको पाचवड गाउँको हो । त्यहाँका एक पुरुषले करिब ४ महिनासम्म आफ्नी नाबालिग छोरीको यौनशोषण गरे । यो कर्तुतको थाहा तब भयो जब पीडित युवती गर्भवती भइन् । जाति पंचायतले आफ्नो कानुनअनुसार गाउँलेको बीचमा बाबु र छोरीलाई सजाय दिएको हो ।
पीडित बालिकाकी आमाको केही वर्षअघि मृत्यु भइसकेको छ । जसका कारण बाबुले छोरीबाटै आफ्नो यौन प्यास मेटाउथे ।
पंचायतले यौन शोषणमा परेकी बालिकालाई पनि सजाय दिएपनि गाउँले छक्क परेका छन् । बाबुलाई त बलात्कार आरोपमा सजा सुनाइयो तर, छोरीलाई किन सजाय दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
जसमा छोरीलाई सजाय दिनुको कारण अहिलेसम्म यस्तो अत्याचार सहनु रहेछ । पंचायतले पीडित बालिकाले चार चार महिनासम्म एकपटक पनि यस्तो कर्तुतको विरोध नगरेपछि उनलाई पनि दोषी ठहर गरेको हो ।